नेपाल टेलिकममा क–कसको निस्कियो नाम ? - Baikalpikkhabar
नेपाल टेलिकममा क–कसको निस्कियो नाम ?
माघ २९, २०७५ काठमाडौं/ नेपाल टेलिकमले खुलाएको विभिन्न पदको विज्ञापनमा लोकसेवा आयोगले लिएको लिखित परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक भएको छ ।
सफल उम्मेदवारलाई टेलिकमले अन्तर्वार्ताको तीन दिनअघि नै कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालयस्थित पदपूर्ति सचिवालयमा सम्पर्क राख्न सूचित गरेको छ ।
अन्तर्वार्ता केन्द्रीय कार्यालय भद्रकाली प्लाजामा फागुन २१ गतेदेखि २८ गतेसम्म हुनेछ ।
मङ्गलबार, २९ माघ, २०७५, बिहानको ११:१२ बजे